हार्दिक बधाई🙏🙏🙏 पल शाहले शुरु गरे निशुल्क अक्सिजन अभियान, कोही नेपाली म’र्दैन अब अक्सिजन नपाएर ! – News Nepali Dainik
हार्दिक बधाई🙏🙏🙏 पल शाहले शुरु गरे निशुल्क अक्सिजन अभियान, कोही नेपाली म’र्दैन अब अक्सिजन नपाएर !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २१, २०७८ समय: २१:३१:४०
काठमाडौ । कोरोना संक्रमित भएर पनि अक्सिजनको अभावमा जोखिममा परेकाहरुलाई बचाउन अभिनेता पल शाहले अभियान सुरु गरेका छन् । उनले अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको ज्यान बचाउन अभियान सुरु गरेका हुन् । उनले अक्सिन सिलिण्डरको अभाव कम गर्नका लागि अभियान सुरू गरेको बताएका हुन् । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
Last Updated on: May 4th, 2021 at 9:31 pm